Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Andrea Pirlo Child Story Story na-emeghị ihe ọ bụla
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; “Onye Okike”. Anyị Andrea Pirlo Child Story Plus Unold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke onye anwansi anwansi na Italian Football Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Andrea Pirlo Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Akụkọ Andrea Pirlo nke Childhoodmụaka - Ndụ mbido:
A mụrụ Andre Pirlo na 19th ụbọchị nke May 1979 na Flero, Italy site na nne, Livia Gatta na nna, Luigi Pirlo. Tali bụ otu n'ime ụmụ abụọ yana nwanne ya nwoke Ivan na nwanne nwanyị, Silvia Pirlo.
Medhi Benatia Child Story Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Pirlo bụ football protected dị ka nwatakịrị. Ọ na-etolite, ya na nwanne ya nwoke na ndị enyi ya na ájá dị n'ụsọ oké osimiri nke Viareggio dị na Tuscany, ebe ndị ezinụlọ ya gara ezumike.
Site na ezumike, o jiri oge ezumike nwata ya na mpaghara Brescia. Nke a bụ ebe talent football ya mepụtara.
Aaron Ramsey bụ nwata Akụkọ nke na-agbaghaghị eziokwu
Andrea Pirlo Biography - Ọrụ na Nchịkọta:
Pirlo malitere ọrụ klọb ya dị ka onye na-awakpo midfielder na obodo ya, Brescia. Ọ dọtara uche mba ụwa maka oge mbụ na 13, mgbe ya na ndị otu ya, 'Voluntas Brescia U15s', sonyere na 1992 'Dana iko'.
Ha na-eme ya na ọkara egwuregwu tupu a kụọ ya aka. N'okpuru ebe a ka ogbugba nke ya na-eme ihe mbụ ya.
N'okpuru ebe a, Pirlo dị obere na-eburu ọlaọcha mbụ ya dị ka akụkụ nke ndị ntorobịa Brescia.
H nwere ọganihu n'ọkwá nke mere ka ọ bụrụ onye isi na otu. Pirlo nyeere ndị otu ya aka inweta aha Serie B wee nweta nkwalite Serie A na 1997. Dịka nwata, inwe ọzụzụ na-adịghị agwụ agwụ bụ usoro nke ụbọchị ahụ.
Onye nkuzi ya Francoonce kwuru ozugbo..."Anyị gụchaa ọzụzụ, m ga-ebipụ ike m nwere ike ịsị Andrea laa, ma ọ bụ ọ gaara eme ihe niile n'abalị ahụ! ”
Pirlo nyere ihe kachasị mma ma hụ nsonaazụ. Omume ọma ya mere ka ọ kwaga Internazionale na 1998.
Mario Balotelli nwa akwukwo akuko nke oma
Pirlo mgbe Inter na-agba mbọ inweta oge na ụlọ ọhụrụ ya, n'ihi enweghị ike ya, yana asọmpi asọmpi na ndị ọzọ na-arụ ọrụ ya. E mechara nye ya na mbinye na 1999.
N'agbanyeghị nkwenye na-aga nke ọma na Reggina, na Brescia ọzọ, Pirlo ka na-enweghị ike ịbanye na ntinye mmalite nke Inter, eresị ya ndị Milan na-agafe obodo na 2001.
Na Milan, onye njikwa Carlo Ancelotti kpebiri ịgbanwe Pirlo n'ihu agbachitere dị ka onye na-egwu egwu miri emi, nke mere ka o nwekwuo oge na bọl iji dozie mwakpo ndị otu ya.
Pirlo rụpụtara ọrụ ọhụrụ ya, n'oge na-adịghịkwa anya ọ ghọrọ onye na-egwu egwuregwu ụwa, na-arụ ọrụ dị mkpa na mmeri Milan na-esote.
Na 2011, ọ hapụrụ Milan mgbe ya na ụlọ ịgba chaa chaa. O sonyeere Juventus na nnwere onwe n'efu.
Tupu Pirlo abịa na Juventus, ndị agha ahụ meriri-ebe ọ bụ na 2003. O wepụtara utu aha Serie A anọ (2012, 2013, 2014, na 2015), utu aha abụọ Supercoppa Italiana (2012 na 2013), na Coppa Italia (2015) gaa na klọb. Ọ na-egwuri egwu na 164 maka ha wee gbata ihe mgbaru ọsọ 19.
Na 2015, ọ banyere na 'New York City FC', otu ndi so na 'Okpokoro Njikọ'. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Andrea Pirlo Ndụ Ezinụlọ:
Andrea Pirlo sitere na ọgaranya ezinụlọ. Nna Pirlo guzobere ụlọ ọrụ na-ere ọla Brescia n’afọ 1982 a kpọrọ Elg Steel.
Pirlo n'onwe ya nwere oke na azụmaahịa ezinụlọ. N'okpuru bụ foto nke ya na papa ya, Luigi Pirlo.
Andrea Pirlo na nna - Luigi Pirlo nọ.
N'ihe gbasara akụ na ụba ya sitere na azụmaahịa ezinụlọ ya na ọrụ ịgba bọl, Pirlo kwuru na N'ajụjụ ọnụ ya na Italiantali Ibe Efu magazine na ọ dịghị mgbe ọ na-ekwu banyere ego.
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke mgbasa ozi dị maka ezinụlọ Andrea Pirlo. Nke a gụnyere nne ya, Livia Gatta, Nwanna (Ivan Pirlo) na nwanne nwanyị (Silvia Pirlo).
Ọnye na-bụ Deborah Roversi? Andrea Pirlo Nwunye Mbụ:
N'ime afọ 1999, Andrea Pirlo hụrụ Deborah Roversi n'anya n'oge ọ nọ na Inter Milan.
Ọ bụ oge ọ diri oge kachasị sie ike n'ịgba egwu. Oge e zighachiri ya ego mbinye ego nye Reggina na Brescia.
N'ịchọ ilekwasị anya na ndụ ya, Pirlo na Deborah kpebiri ịlụ di na 2001 na obodo ha Flero na Brescia.
Ọrụ Pirlo kwalitere mgbe ha lụrụ. Afọ abụọ mgbe emume ha gasịrị, ha abụọ nwere nwa mbụ ha. Nwa nwoke ha kpọrọ Niccolò (a mụrụ 2003). Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, ha nwere nwa nwanyị aha ya bụ Angela (a mụrụ 2006).
Pirlo na Deborah diri oge ihe isi ike ruo ọtụtụ afọ. Pirlo enwechaghị obi ụtọ. E ji ya mee ka udo dị jụụ.
N'oge na-adịghị anya, mmekọrịta ha na-enwe obi ụtọ ka ha na-anọpụ onwe ha ọbụna n'ihu ọha.
Na 2014, Pirlo na Roversi gbara alụkwaghịm mgbe ha lụsịrị afọ iri na atọ, na-agbaso mmekọrịta Pirlo na Valentina Baldini, nwanyị ọ zutere na klọb golf ya.
Ụmụ ya abụọ (Niccolò na Angela) amụtala ịhụ n'anya na ịnakwere Valentina dịka nne. N'okpuru ebe a bụ foto nke ha inwe oge mara mma na Miami, US.
Andrea Pirlo Family Foto.
Ha emeela ememme mmeri ọnụ.
Nwanyị nwanyị Andrea Pirlo, Valentina mụrụ ụmụ ejima na 10th nke July, 2017. Ọ kwupụtara nke a na blog ya. A na-akpọ ejima ahụ Leonardo na Tommaso.
Daniele De Rossi nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
Andrea Pirlo Twins- Leonardo na Tommaso.
Andrea Pirlo Wine Azụmaahịa:
A maara Pirlo maka ịbụ onye na-achọ mmanya. Dị nnọọ ka Andres Iniesta, Pirlo bụ nnukwu nwa nwoke na azụmaahịa mmanya.
Andrea Pirlo- Ọkachamara Mmanya.
Pirlo nwere ubi vine dị ukwuu n'Ịtali, nke na-emepụta karama 15-20,000 kwa afọ. Pirlo nwere ike ịṅụ mmanya n'ubi-vine ya ụbọchị niile.
Andrea Pirlo na-etinye mmanya na mmanya ya n'ubi vaịn ya.
Andrea Pirlo Biography Eziokwu - Nightbọchị kachasị njọ nke ndụ ya:
Pirlo kwetara na akụkọ ihe mere eme ya 'Echere m na m na-egwu egwu', na o lere anya na ị ga-agbacha ya niile mgbe Liverpool laghachiri n'ụzọ dị ịtụnanya megide Milan na 2005 Champions League ikpeazụ.
N'okwu ya ...Echere m banyere ịkwụsị n'ihi na, mgbe Istanbul gasịrị, ọ nweghị ihe ọzọ bara uru. Njikọ nke 2005 Champions League merụrụ m ahụ. Edetara m njedebe nke akara ahụ: njem ahụ agwụla. Akụkọ agwụla, mụ onwe m gwụkwara. '
Thebọchị kachasị mwute nke ndụ Andrea Pirlo
N'ime ọnwa iri na atọ, ọ bụ onye meriri iko ụwa. N’ime afọ abụọ, Pirlo gbara ịbọ ọbọ ahụ mgbe Milan tiri Liverpool na Athens.
Vebọ ọbọ Liverpool bụ mmeri Champions League nke abụọ ya, nke mbụ na-abịa megide Juventus na 2003. Hmmm ……Lee ka ọ ga-esi bụrụ ihe efu ma ọ bụrụ na Pirlo emeela ihe n'eziokwu ya.
Andrea Pirlo Beard Eziokwu:
Ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-apụghị ịkọwapụta, ya beard nma ekpughela na ọ na-edozi akpụkpọ ụkwụ ya n'ikpeazụ. A na-etinye mmanya ya na musk nke afụ ọnụ ya dị ike.
Andrea Pirlo Bio - Mgbasa Ozi:
Obi abụọ adịghị ya, Pirlo bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ kachasị ahịa na Europe n'ụwa. O gosiputala na oge ịse ejiji nke GQ na-ejikwa anyụike.
Andrea Pirlo akụkọ ndụ eziokwu - Nicknames:
Ndị otu egwuregwu n’otu egwuregwu mba Italiantali kpọrọ aha Pirlo “Onye Okike” n'ihi ụzọ o si ewuli egwuregwu ma na-esetịpụ ohere iji nweta ihe mgbaru ọsọ site na iji ogologo oge, gafere site na ịgafe.
Ọ ketara aha ya “Metronome” ka ị na-egwu egwu na Milan, maka ụzọ o si metụta egwuregwu site na ịchịkwa oge nke egwuregwu otu egwuregwu ya site na egwuregwu ya na-aga nke ọma na etiti, yana ikike ya ịpụta onwe ya nye ndị otu ya ịnata ma kesaa bọọlụ ahụ.
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị Juventus na-akpọ ya “Prọfesọ”, "Maestro ”, na "Mozart ”. Ha elewo ya anya dị ka otu n'ime ndị kasị egosipụta ọkwá a, n'ihi ọhụụ ya, njikwa bọl, ihe okike na ikike ịgafe.
Andrea Pirlo Biography - Otu n'ime ndị a kacha hụ n'anya:
E nwere ọtụtụ nnukwu ndị ọgba bọọlụ. Mgbe ahụ, n'elu ha, e nwere otu ndị egwuregwu pụrụ iche nwere ọgụgụ isi bụ ndị nyere iwu na nsọpụrụ na ekele niile.
Na oge na oge ndị na-adịbeghị anya, ha gụnyere Lionel Messi, Ronaldo ochie, ọhụrụ Ronaldo, Xavi, Andres Iniesta, Zidine Zidane - na n'ezie, Andrea Pirlo.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ banye na Chelsea:
Pirlo fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndị Grey Chelsea Giants na-azụ na 2009 na-enwe olileanya ịrụ ọrụ n'okpuru onye nchịkwa mbụ Carlo Ancelotti. Otú ọ dị, onyeisi ndị ọchịchị AC Milan bịarutere ma nọrọ na Italian Club maka oge abụọ ọzọ.
Eziokwu Andrea Pirlo Playstation:
Pirlo na nkwupụta kwenyere na PlayStation bụ nke abụọ kachasị mma mgbe wiil ahụ gachara.
A kọrọ na ọ nọrọ n'ehihie mmemme WC 2006 nke ọ na-egwu na PlayStation. Ọ na-esoro onye ya na ya na-eme egwuregwu Italiantali ọtụtụ oge.
Akara maka Scholes:
Paul Scholes bụ nanị onye England Bekee Pirlo na-eche na ọ kasị ukwuu na akụkọ Bekee akụkọ ihe mere eme.
Dị ka Andrea Pirlo si kwuo, “Naanị onye England na-eto eto n’etiti ọrụ m bụ Paul Scholes. Ọ mara mma n'ime ya. Ndị ọzọ bụ ndị aghụghọ ”
Nkwupụta okwu ndị a sitere na Akụkọ thetali sawtali hụrụ ọnụ ọgụgụ ihe osise dị n'okpuru.
Ọnụ ọgụgụ dị n'elu bụ ma eleghị anya, 'nri echebara echiche' maka football pundits na Manchester United fans n'ụwa nile.
Ọ ga-ewepụta otu ezigbo ihe akaebe maka ndị ga-achọ iji atụnyere atọ dị n'etiti etiti. Frank Lampard bụ ihe na-abụghị otu a.
Akwụkwọ Mgbasa ozi Italian
Nicolo Barella Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ